I-Harmony e-Paradise - Estate ku-Tropical Acre - I-Airbnb
I-Harmony e-Paradise - Estate ku-Tropical Acre
Keaau, Hawaii, i-United States
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Laura And Aki
U-Laura And Aki Ungumbungazi ovelele
Indawo yesimanjemanje engaphezu kuka-3,500 sq ft enekhwalithi yokuphumula engalala izivakashi ezingafika kweziyi-11, endaweni evundile enomhlaba. Igumbi lokuhlala elikhulu, ikhishi elikhethekile kanye nezindawo zokudlela, amagumbi okulala amane amahle, ukutadisha, namagumbi okugeza amathathu amakhulu aneshawa yokuhamba ngezinyawo. Izikhala ezinkulu ezimboziwe zangaphandle ezinezihlalo ezinethezekile nezindawo zokudlela.
• Indawo enethezekile nesezingeni lesimanjemanje engalala izivakashi ezingafika ku-11, endaweni eyihektare elungiswe ngokuphelele. Le ndawo siyibiza ngokuthi i-Hale E Komo Mai, 'indlu eyamukelwayo'.
• Izindawo zokulala zase-Ohia zinegumbi lokuhlala elikhulu elinosilingi ophakeme ngokwedlulele, ikhishi elikhulu eliklanywe kahle ngendlela emangalisayo, indawo yokudlela elungele wonke umuntu, uphiko lwegumbi lokulala eliwuchwepheshe elijabulisayo, kanye nelinye igumbi lokulala elihlomele kahle. Ucwaningo luyakhanya futhi lukwazi ukufinyelela ngqo endaweni enkulu embozwe ngaphandle. Futhi, izindlu zokugezela ezimbili ezihlome kahle ezifakwe amathayela aphelele, womabili anezishawa zokuhamba ezinkulu.
• Indawo yokuhlala ye-Orchid inamakamelo amabili okulala abanzi, womabili anendawo yokuhlala kanye ne-sapce ephumuzayo. Kukhona negumbi lokugezela eligcwele elinendawo enkulu yokuhamba ngeshawa.
• Ivulandi elikhulu elimboziwe linendawo yokosa inyama elula.
• Izindawo zokuzijabulisa ezinkulu ezimboziwe ezinezindawo zokuhlala ezingaphandle kanye nezindawo zokudlela.
• Ihektare elibukeke ngokugcwele elinezinhlobonhlobo eziningi zamasundu, i-gardenia enephunga elimnandi lasezulwini nezinye izitshalo eziqhakazayo, nengadi encane enezihlahla zamawolintshi, ulamula, umcako kanye nokwatapheya (ngesikhathi sonyaka). Itholakala kumgwaqo othule, ongasekho, owakhelwe ngemuva kwendawo yokungena yangasese enezihlahla zomdabu zase-Ohia nama-orchid asendle.
• Ilungele uku:
o Hilo ukuthenga, izindawo zokudlela kanye nezinsiza
o Amadolobha aseduze i-Keaau ne-Pahoa: izimakethe zabalimi, amakhefi nezindawo zokudlela
o Ibhishi elisha lesihlabathi esimnyama; Ukugeleza kwe-Pahoa lava; ukugeleza kwe-lava ye-Kalapana; I-Volcano National Park; I-Richardson Beach (imikhomo ngenkathi)
o I-zoo yendawo; izingadi zezitshalo
o Ukuhamba/ukugijima/ukugibela ibhayisikili emigwaqweni eyimfihlo engamakhilomitha ayi-100 endaweni ehlukaniswe, nayo yonke imigwaqo emikhulu igandayiwe. Ingabe uziqeqeshela ukugijima, umjaho wamabhayisikili noma i-triathlon? Maningi amathuba okuqeqesha lapha!
o Ukubhukuda kwamahhala izinsuku eziningi e-Pahoa nase-Hilo emachibini amakhulu omphakathi anama-life guard.
o Ikhishi elihle elinempahla yensimbi engagqwali, izinto zokubala ze-corian, i-cabinetry yangokwezifiso kanye ne-bar top
o Ingaphezulu lesitofu sepropane kanye nohhavini ophindwe kabili
o Isiqandisi esikhulu esinomenzi weqhwa nomshini wokuwasha izitsha othulile
o Amakamelo amaningi okuphekela kanye nendawo yokubeka iwayini
o Amabhodwe amaningi, amapani, izitsha, izitsha nezinto zokusika
o I-Microwave, umenzi wekhofi kanye ne-grinder, i-rice cooker, i-blender, njll.
o Iwasha engusayizi ogcwele kanye nesomisi
o Amashawa ashiswa nge-propane ithangi lamanzi ashisayo elinomthamo omkhulu
o Isevisi ye-intanethi ye-Spectrum high speed nge-WiFi kuzo zonke izindawo zokuhlala.
o Isidlali se-Roku kanye nesikrini esiyisicaba esingamayintshi angu-65 intshi ye-Smart TV nesidlali se-DVD sokusakaza i-TV noma amamuvi (futhi umtapo omncane wamamuvi we-DVD uyatholakala)
o Iwasha enkulu neyomisa. Ukufinyelela kwe-Netflix ne-Prime Video.
o Ibarbecue kuvulandi omkhulu omboziwe, onezinto zokupheka kanye nezindawo zokuhlala nezindawo zokudlela ezinethezekile. Izinsiza eziningi zokudlela nezokudla.
• Isivumelwano sokuqasha
o Isivumelwano sokuqasha sesikhashana kanye nemithetho yendlu iyasebenza kukho konke ukuqashwa (okuzohlinzekwa njengengxenye yenqubo yokuqasha)
ubusuku obungu-7 e- Keaau
Indawo yasemakhaya emangalisayo enomgwaqo owubhuqu osekupheleni kwengxenye yemayela lokugcina (imigwaqo egandayiwe eya kulelo phuzu). Ilungele kakhulu i-Hilo, i-Keaau ne-Pahoa nezinye izindawo ezisempumalanga ye-Big Island. Uhlangothi lwaseKona kanye nogu lwaseKohala luqhele ngamahora amabili kuphela.
Ibungazwe ngu-Laura And Aki
Uma udinga noma yiluphi usizo ngesikhathi uhlala, sihlinzeka ngolwazi lokuxhumana njengengxenye yenqubo yokubhuka.
ULaura And Aki Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: STVR-19-355887 and NUC-19-884. Also TA-111-562-1376-01 and GE-111-562-1376-01
Hlola ezinye izinketho ezise- Keaau namaphethelo